Taliban oo Weerar Naf-hurnimo Ku Dishay Tobaneeyo Askari.. Afghanistan.
Sunday February 12, 2017 - 10:27:48 in Wararka by Super Admin
Tobaneeyo Askari ayaa lagu dilay weerar xooggan oo ciidamo katirsan ciidamada Xukuumadda Dabadhilifka Afghanistan lagula beegsaday Koonfurta wadankaasi.
Wararka ka imaanaya Gobolka Helmand ayaa sheegaya in weerar naf-hurnimo oo uu fuliyay dagaalyahan istish-haadi ah lagu beegsaday isku imaatin ay ku sugnaayeen askar iyo saraakiil katirsan melleteriga Afghanistan.
Guddoomiyaha gobolka Helmand ugu magacaaban xukuumadda Kaabuul ayaa sheegay in qaraxa lala helay ciidamo ku xoonsanaa Banki kuyaal magaalada Senjiin xilligaasi oo ay lacago mushaaraad ah qaadan lahaayeen.
Bayaan kasoo baxay Xarakada Islaamiga Taliban ayay ku sheegatay Mas’uuliyadda weerarka waxayna ku hanjabtay in ay sare uqaadi doonto weerarada nuucaan oo kale ah.
Madaxweyne ku xigeenka Afghanistan Cabdalla Cabdalla ayaa warbaahinta u sheegay in 15 Askari ay dhimasho iyo dhaawac uga noqdeen weerarka.
Taliban ayaa billaawgii sanadkaan qaadday silsillado weeraro ah oo ay ku beegsatay askar iyo mas’uuliyiin katirsan xukuumadda Kabul, waxayna xarrakadu diiday dhammaan wadahadalladii la doonayay in lagusoo gaba gabeeyo dagaalka 16 sana jirsaday ee Afghanistan ka socda.